Bafudukela kuleli abaseSwazini - Ilanga News
Home Izindaba Bafudukela kuleli abaseSwazini
Bafudukela kuleli abaseSwazini
Kuthiwa namasosha agada umngcele oPhongolo kawasabavimbi abawelayo
Intsha yaseSwazini imise yonke into ngenhloso yokufaka ingcindezi kuhulumeni weNkosi Mswati III.
SEBEQALILE ukufu-dukela eNingizimu Afrika abantu bezifunda ezahlukene za-seSwazini, ebhekene nezibhelu zamalungu omphakathi alwa no-mbuso weNkosi Makhosetive Mswati III Dlamini.
Sekuphele amasonto amathathu leliya lizwe libhekene nezinkinga njengoba intsha yakhona – ngokulekelelwa ngezinye izinhlangano – imise yonke into ngenhloso yokufaka ingcindezi kuhulumeni weNkosi Mswati III ukuba uvumele ukusebenza ngokusemthethweni kwezi-nhlangano zezombusazwe kuleliya lizwe.
Bafuna kuhlakazwe iphalame-nde ngokushesha, bathi okubazwi-sa ubuhlungu wukuthi iNkosi Mswati III iphila impilo yobukhazi-khazi kodwa abantu bayo beswele ngendlela edabukisayo. Kucekelwe phansi ngomlilo izakhiwo zompha-kathi okuyizitolo, amagaraji athe-ngisa izimoto, kwashiswa amaloli namabhasi athutha umphakathi.
Usuku nosuku kuchitheka igazi kuleliya lizwe. Uhulumeni wakhona uyalele amasosha namaphoyisa ukuba alawule isimo, okuhambisa-na nesihluku esibhekiswe entsheni.
ILANGA lizibonile izithombe-mnyakazo (videos) eziningi lapho amasosha engenela abantu ema-khaya, ebakhipha ezindlini maqe-de bathelwe isibhaxu. Iningi le-ntsha seliyalele abadala balo uku-ba bazame ngazo zonke izindlela ukuthola izindawo abazokhosela kuzona njengoba kusenezinxu-shunxushu.
Bathi kusukela kwabaneminyaka ewu-16 kuya phezulu, mabaphume ngobuningi babo kuyiwe empini nohulumeni. ILANGA liyayazi emi-nye imindeni yakuleliya lizwe efu-dukele ezindaweni eziningi eza-khele iNgwavuma, okukhona kuzona iNkungwini neManyiseni.
Okwenza kube lula ukuba aba-ntu bawelele eNingizimu Afrika ngakule ndawo, wukuthi kalukho ucingo oluyihlukanisa neSwazini. Kubikwa ukuthi namasosha agada umngcele oPhongolo kawasabavi-mbi abantu ngoba ayasiqonda isi-mo ababhekene naso ezweni labo.
Umthombo waleli phephandaba uveze ukuthi isimo sishube kanga-ngokuba akusekho ngisho indawo yokubeka unyawo esiteshini sama-phoyisa eSiteki, esiseningizimu yeSwazini.
ILANGA likhulume noMnu Sandlasenkosi Magagula ongomunye wababhikishi, othe kusazoba nzima.
“Kasihlehli, ngikhuluma nje, ngiyafika ngibuya entabeni besiha-mbise izingane eLubonjeni
(eNgwavuma). Sizoqhubeka siyiba-mbe ishisa. Sibhekene nebamba li-kandunankulu wesizwe, uMnu The-mba Masuku, indodakazi kaMswati III uSkhanyiso nombutho wamasosha ebambisene namaphoyisa. Lokhu sikusho ngoba selokhu ziqa-lile izinkinga lapha ezweni, yibona abakhulumayo ekubeni thina singa-funi bona, uyedwa umuntu esiqo-ndene naye yiNkosi Mswati III.
“Uphethe izwe ngesandla sensi-mbi. Sifuna ukuthi wonke amalu-ngu ephalamende lesizwe afake izi-ncwadi zokwesula ngokushesha. Okubuhlungu wukuthi sibulawa ngabantu abahlome ngezibhamu eziyingozi ekubeni thina singahlomile. Kusazosha okuningi uma ku-wukuthi iNgonyama kayizimisele ngokukhuluma nathi ngoba thina sihlome ngothi lukamentshisi futhi siqondene ngqo nezakhiwo zayo na-mabhizisini enamasheya kuwona,” kusho uMnu Magagula.
UMnu Thulani Kunene onguno-bhala-jikelele weCommunist Party of Swaziland, uthe ziningi izinkinga ezibhekene naleliya lizwe kodwa ngeke kuthathe ngisho ngaphezulu kwemizuzu ewu-10 ukuzilungisa. Uthe inhlangano yabo ikhathazeki-le ngokufa kwabantu, kodwa konke kulele ezandleni zeNkosi Mswati III ukuba kulunge izwe.
“Into edingekayo wukuthi iNgo-nyama ibize isigcawu sabezindaba lapho ikhona – njengoba kuze kube yimanje sonke kasiyazi – imemezele ukukhululwa kwezinhlangano zezo-mbusazwe ukuba ziziphathe.
“Imemezele ukukhululwa kwabo bonke abantu ababoshelwe amacala athinta ipolitiki, nokubuyiswa kwalabo abadingiswa ezweni. Lokhu ngeke kuthathe isikhathi eside,” kusho uMnu Kunene.
Uthi kudala kwaqala ukubulawa kwabantu ngaphansi kwegama lo-kuzivikela. Uveze ukuthi bona nje-ngenhlangano yamakhomanisi ku-leliya lizwe beluleka amalungu ephalamende lesizwe ukuba afake izincwadi zokwesula.
“Siyabanxusa abahlonishwa uku-ba bafake izincwadi zokwesula ngo-ba kwabona kufanele bakuqonde ukuthi ukuqokwa kwabo akubanga semthethweni njengoba babekho-njwa ngemakhanda ngamakhosi angaphansi kweNgonyama. Kuyaye kuthiwe kuzoqokwa umuntu ozohlonipha indlunkulu.
“Yebo siyavuma vele kufanele kube njalo, kodwa abantu kabani-kwa ithuba lokuzikhethela abasuke bemdinga ngaleso sikhathi. Sikulu-ngele ukuba bafike kithi, okanye baxhumane nathi ngezingcingo, sibeluleke ngokubaluleka kokufaka izincwadi zokwesula. Ukungesuli kwabo kungabenza bazithole sebeyofakaza nabo uma sesithole ama-ndla okuphatha umbuso ngoba kho-na kuyacaca ukuthi kuzokwenzeka okudingwa ngabantu.
“Kumanje izwe libhekene ne-nhlekelele yokubulawa kwabantu, babulawa ngamasosha. Umbuzo uthi njengoba zivaliwe izinto ezini-ngi ngubani okhokhela zonke lezi zindleko zamasosha namaphoyisa?
Umgcinimafa ngeke abe namandla okukhokhela zonke lezi zinto uma engasala yedwa ephalamende,” ku-sho uMnu Kunene.
Namanje akwaziwa ukuthi iku-phi iNgonyama yamaSwazi njengoba selokhu yagcina ukubonakala ngoMsombuluko igibela indiza. Ezinsukwini ezimbalwa indodakazi yayo endala uSkhanyiso – okukha-lwa ngokuthi iqhoqhobele izikhu-ndla eziningi – ikhiphe isitatime-nde, yathi abantu abafayo eSwazini kababulawa ngamasosha akuleliya lizwe.
USihlalo weSouthern African Development Community (Sadc) ohlangothini lwezepolitiki, ezokuvikela nezokuphalepha – ongume-ngameli waseBotswana – uDkt Mokgweetsi Masisi, ukhiphe isitatimende ethi banxusa uhulumeni waseSwazini ukuba uzame ukuthola isixazululo ezinkingeni zaleliya lizwe. Uthe ngokwazi kwabo uyedwa umuntu oshonile.
Ihhovisi lebamba likandunankulu waseSwazini, uMnu Themba Masuku, likhiphe isitatimende la-pho lithe kalihambisani nazo zonke izigameko zokushiswa kwempahla yabantu ezweni. Kulesi sitatimende kuvezwe ukuthi kuqiniswe ezoku-phepha ngenhloso yokunqanda izi-gameko zokwephulwa kwemithetho yokuvalwa kwezwe ngenxa yoku-bheduka kweCovid-19.
Previous articleKubukeka ezogcina kwiChiefs uMbule
Next articleUfanise uZuma noNkulunkulu